Ungamisa Kanjani Ukuwa Kwezinwele Namathiphu Okulawula Ngezixazululo Zasekhaya Lasekhaya - Izixazululo Zasekhaya
Izixazululo Zasekhaya Zokumisa Ukuwa Kwezinwele
Ebhekiswe 'njengekhazimulo lomqhele', ama-tresses akhombisa ngqo ubuntu nesitayela somuntu. Ukulahleka kwezinwele ngokweqile kungaba yinkinga ekhathazayo, okuvame ukudala ukukhathazeka nokuphazamisa ukuzethemba, ikakhulukazi kwabesifazane. Kodwa-ke, uma kutholakala ukuthi kulungile, ungalawula ukuwa kwezinwele ngamakhambi athile asekhaya angokwemvelo futhi asebenzayo ekongeni izingidi zakho.
1. Izimbangela Zokulahleka Kwezinwele
ezimbili. Amathiphu Wokulawula Ukuwa Kwezinwele
3. Amakhambi Emvelo Okwelapha Ukuwa Kwezinwele
Isine. Ukudla Kwezinwele Ezinempilo
5. Izeluleko Zokunakekelwa Kwezinwele Ngezikhiye Eziphilile
6. Imibuzo evame ukubuzwa ngokuwa kwezinwele
1. Ukuntuleka kokudla okunempilo
Kungenzeka ukuthi izakhamzimba ezibalulekile zingahle zidle ekudleni kwakho njenge-ayoni, ithusi, i-zinc namaprotheni. Ukushoda kukavithamini D kungenye imbangela yokulahleka kwezinwele. Ukuze ugweme lokhu, qiniseka ukuthi uyaphuma uthambise ilanga.
2. Ukungalingani Kwehomoni
Ngemuva kweminyaka engama-30, abesifazane bangathola ukungalingani kwe-hormonal okungadala ukulahleka kwezinwele. Lokhu kuvame ukubangelwa ukuguqulwa ngokweqile kwe-dihydrotestosterone (DHT). Noma i-estrogen iyi-hormone eyinhloko eyenziwa ngabesifazane, i-testosterone namanye ama-androgens afana ne-DHEA nawo ayenzeka emzimbeni wesifazane. Njengoba abesifazane befika eminyakeni ethile, bangaqala ukuguqula la ma-androgens abe yi-DHT.
3. Izinkinga ze-thyroid
Uma indlala yegilo, engaphambi kwentamo, ikhiqiza ngokweqile noma inani elanele lehomoni yegilo, khona-ke umjikelezo wokukhula kwezinwele ungashintsha. Kodwa-ke, uma unenkinga ye-thyroid, uzobona ezinye izimpawu kanye nokulahleka kwezinwele njengokuzuza kwesisindo noma ukwehla, ukuzwela emakhazeni noma ekushiseni, kanye nezinguquko ezingeni lokushaya kwenhliziyo.
4. I-Polycystic ovary syndrome (i-PCOS)
Abesifazane abane i-polycystic ovary syndrome (I-PCOS) inokungalingani kwe-hormonal okudala amazinga aphezulu we-androgens kunokujwayelekile. Lokhu kuvame ukudala ukuthi izinwele zikhule ebusweni nasemzimbeni, kanti izinwele zekhanda ziyancipha. I-PCOS nayo ingaholela ezinkingeni ze-ovulation, induna, nokuzuza kwesisindo.
5. Amaphilisi Wokubeletha
Amaphilisi okulawula ukubeletha angadala ukulahleka kwezinwele. Ama-hormone asephilisi acindezela i-ovulation angadala ukuthi izinwele zinciphe, ikakhulukazi kwabesifazane abanomlando womndeni wokulahleka kwezinwele. Kwesinye isikhathi ukulahleka kwezinwele kungenzeka lapho uyeka ukuthatha iphilisi. Eminye imishanguzo ehambisana nokulahleka kwezinwele izinciphisi zegazi nemithi elapha umfutho wegazi ophakeme, isifo senhliziyo, isifo samathambo nokudangala.
Ukucindezeleka ngokweqile kungadala ukulahleka kwezinwele okungazelelwe okungahlala izinyanga ezimbalwa. Ukunciphisa ukucindezeleka ngokuzivocavoca umzimba, ukuzindla i-yoga futhi ukubhucungwa umzimba kuzonciphisa amathuba akho okuba nezinwele.
7. Imikhiqizo yezinwele
Izinwele eziphathwe ngokweqile zingaholela ekulahlekelweni izinwele ngenxa yamakhemikhali anobuthi atholakala kudayi nemikhiqizo yesitayela. Ngokufanayo, cishe wonke ama-shampoo aqukethe i-Sodium lauryl sulfate (SLS) enomthelela onobuthi kumasosha akho omzimba futhi kufakazelwe ukuthi kudla izintambo zezinwele futhi kuphazamisa ukukhula kwezinwele. Kunconywa ukunamathela kuma-shampoo emvelo nodayi.
8. Izimo Zezokwelapha
- I-Telogen effluvium
Ukuchithwa okujwayelekile kusuka ekhanda lonke. Sivame ukulahlekelwa yizinwele eziyi-100 ngosuku kepha kwesinye isikhathi ukuchitheka kuyashesha ngenxa yengcindezi, ukugula, imithi noma ama-hormone. Izinwele ngokuvamile zikhula futhi zingakapheli izinyanga eziyisithupha.
- I-Androgenetic alopecia
kwabesifazane, izinwele ngokuvamile ziyancipha phezulu, endaweni engaphambili, ngemuva nje koboya bezinwele, kepha zihlala zijiyile ngemuva. I-enzyme ibangela ukuguqulwa kwe-testosterone yobulili besilisa iye kwenye i-hormone, i-dihydrotestosterone (i-DHT), ebangela ukuthi izintambo zezinwele zikhiqize izinwele ezincanyana zize ziyeke.
- I-Alopecia areata
isifo sokuzilimaza esithinta kuze kufike ku-2% wabantu. Kubanga izingcezu eziyindilinga zokulahleka kwezinwele futhi kungaholela ekubeni mpandla ngokuphelele. Ezimweni eziningi, izinwele ziyabuyela emuva.
Njengoba sikhula, izinga lapho izinwele zethu zikhula livame ukwehla. Imicu yezinwele iyancipha futhi iba nombala omncane, futhi izinwele ziba mncane, ziba ngcono futhi zibe mpunga. Ukuze ugcine izinwele zakho ziphilile, yidla ukudla okuphelele okusiza ukugcina umzimba wakho ubusha, kanye nezinwele zakho. Uma unayo izinwele ezimpunga ngaphambi kwesikhathi , ungathola lapha izithako zemvelo ezingakusiza.
- Izakhi zofuzo
Ukulahleka kwezinwele okungokofuzo kwaziwa njenge-androgenetic alopecia futhi kwaziwa ukuthi kuyimbangela ejwayelekile yokulahleka kwezinwele. Isakhi sofuzo singazuzwa ngofuzo lomndeni kanyoko noma kababa womndeni, noma kunjalo kungenzeka ukuthi ube nawo uma bobabili abazali bakho belahlekelwe izinwele.
Amathiphu Wokulawula Ukuwa Kwezinwele
Kubaluleke kakhulu ukuqonda uhlobo lwekhanda lakho bese ukhetha i-shampoo efanele. Futhi, udinga ukugeza izinwele zakho ngokuya ngesikhumba sakho. Isibonelo, ngokugeza izinwele nge isikhumba sasekhanda esomile kungaholela ekuweni kwezinwele, noma ukungagezi okhiye abanamafutha kathathu ngesonto kungaholela kokufanayo.
Ngaphezu kwalokho, qiniseka ukuthi i-shampoo ayilayishwa amakhemikhali afaka phakathi i-sulfate, i-paraben ne-silicone engenza ama-tresses akho aqhekeke futhi ngenxa yalokho, athambekele ekwehlukaneni.
Isimo esihle singasebenza ngezimangaliso zokukhiya kwakho. Iqukethe ama-amino acid asiza ukulungisa izinwele ezonakele, iphinde isize ukuzigcina zibushelelezi.
3. Ukudla nokuzilolonga
Udinga ukondla izinwele zakho zonke izakhi ezilungile ikakhulukazi amaprotheni amaningi nensimbi. Kodwa-ke, kanye nokudla i- ukudla okunomsoco qinisekisa ukuthi uzivocavoca umzimba ndawonye. I-Yoga nokuzindla kuyasebenza ekwehliseni ukuwa kwezinwele.
4. Ukwelashwa Ngamakhemikhali
Ukwelashwa ngezinwele okunzima njengokuqondisa, ukuvumela kanye nokufaka umbala nakanjani akulona uhlobo lomusa wakho. Qhubeka nokugwema ukusebenzisa ama-dryer , izinduku ezigoqwayo, ikakhulukazi ezinwele ezimanzi njengoba empeleni zibilisa amanzi kushaft yakho yezinwele bese zibenza ziqhume.
Uma udinga ngempela ukusebenzisa i-blow dry, bese uyigcina endaweni yokushisa ephansi kakhulu. Uma usebenzisa eminye imikhiqizo efudumeza izinwele zakho, qala ngesifutho esiqinisa ikhefu bese uqeda ngesifutho esivikelayo.
Amafutha enza ngcono ukujikeleza kwegazi futhi ondla izimpande. Qiniseka ukuthi uhlikihla i-tresses yakho kanye ngesonto ngamafutha alingana nekhanda lakho. Yimboze ngosiba weshawa bese uyigeza ngeshampu encane ngemuva kwamahora amabili.
6. Miningi kakhulu imikhiqizo yesitayela
Ukusebenzisa imikhiqizo eningi enamakhemikhali ezinweleni zakho kungaba yingozi ngokuhamba kwesikhathi. Kungcono ukubanikeza ikhefu bese uzama izindlela zokupheka zemvelo ezenziwe ekhaya kunalokho.
Amakhambi Emvelo Okwelapha Ukuwa Kwezinwele
1. Isigaxa Seqanda
Amaqanda acebile ngesibabule, i-phosphorus, i-selenium, iodine, i-zinc namaprotheni, okusiza ndawonye ukukhuthaza ukukhula kwezinwele .
Hlukanisa iqanda elilodwa elimhlophe endishini bese ufaka isipuni ngasinye Amafutha e-Olive noju.
Beat ukwenza unama bese uwusebenzisa wonke kusuka ezimpandeni kuya kumathiphu.
Ngemuva kwemizuzu engama-20, hlambulula nge-shampoo emnene.
2. Umsuka we-Licorice
Leli khambi livimbela ukulahleka kwezinwele nokunye ukulimala ezinweleni. Kuyasiza ukuthambisa ikhanda futhi ususe noma yimaphi ama-flakes / dandruff omile.
Yenza unamathisela ngokungeza isipuni sezimpande ze-liquorice yomhlabathi kanye nesafron yekota lesipuni enkomishini eyodwa yobisi.
Faka lokhu esikhunjeni nasekhanda lakho ubude bese ukushiya ubusuku bonke.
Ngakusasa ekuseni, geza izinwele zakho.
Phinda lokhu kabili ngesonto.
3. Ubisi lukakhukhunathi
Amaprotheni namafutha abalulekile kuwo akhuthaza ukukhula kwezinwele futhi avimbele ukulahleka kwezinwele.
Gaya ukhukhunathi osayizi ophakathi bese uyibilisa epanini imizuzu emihlanu.
Hlunga futhi upholile.
Bese ufaka isipuni esisodwa sopelepele omnyama ngamunye ochotshoziwe kanye nembewu yefenugreek ebisi.
Faka isicelo ekhanda lakho nasezinweleni.
Ngemuva kwemizuzu engama-20, hlambulula nge-shampoo.
4. Itiye Eliluhlaza
Leli ti licebile ngama-antioxidants, okusiza ukukhulisa ukukhula kwezinwele nokuvikela ukulahleka kwezinwele.
Cwilisa izigaxa ezimbili noma ezintathu ezinkomishini ezimbili nambili zamanzi ashisayo kuye ngobude bezinwele zakho.
Lapho kupholile, thela lokhu phezu kwekhanda lakho nezinwele, ngenkathi ubhucunga ikhanda lakho ngobumnene.
Hlanza ngamanzi apholile ngemuva kwehora.
5. Ijusi Beetroot
IBeetroot icebile ngamavithamini C no-B6, folate, manganese, betaine ne-potassium, konke okubalulekile ekukhuleni kwezinwele okunempilo. Ngaphandle kwalokho, isebenza njenge-ejenti yokuqeda ubuthi ngokusiza ukugcina isikhumba sasekhanda sihlanzekile.
Bilisa amaqabunga e-beetroot ayi-7-8 bese ugaya kanye namaqabunga e-henna ayi-5-6.
Faka lokhu unamathisela ekhanda lakho bese ushiya imizuzu eyi-15-20 ngaphambi kokuhlanza ngamanzi afudumele.
6. IGreek Yoghurt noju
Hlanganisa izipuni ezi-2 zeyogathi nesipuni esingu-1 soju nolamula esitsheni.
Usebenzisa ibhulashi likadayi, faka lokhu unama ekhanda nasempandeni.
Yishiye imizuzu engu-30 ngaphambi kokugeza ngamanzi abandayo.
Faka lokhu unama kanye ngesonto.
Aloe Vera yikhambi lasekhaya elisebenzayo lokulahleka kwezinwele nokukhulisa ukukhula kwezinwele. Kuyasebenza futhi ekunciphiseni izinkinga zesikhumba sekhanda njengokuluma nokuqhaqhazela.
Thatha isiqu se-Aloe Vera bese ukhipha uginindela.
Yisebenzise ezinweleni nasekhanda lakho bese uyishiya cishe imizuzu engama-45.
Hlanza ngamanzi ajwayelekile. Ungakwenza lokhu kathathu noma kane ngesonto ukuze ubone imiphumela engcono.
8. Imbewu yeFenugreek
Imbewu yeFenugreek noma iMethi ingenye yezindlela ezisebenza kahle kakhulu ekhaya zokumisa izinwele. Ilungisa izintambo zezinwele futhi isiza ekukhuleni kabusha kwezinwele.
Gcoba imbewu ye-fenugreek ubusuku bonke emanzini.
Yigaye unamathisele kahle bese uyifaka ezinweleni nasekhanda.
Shiya unamathisele ekhanda lakho cishe imizuzu engama-30.
Ungasimboza isikhumba sakho sekhanda usebenzisa ikepisi lokugeza ukuze usigcine simanzi.
Ngemuva kwemizuzu engama-30 kuye kwengu-40, yigeze ngamanzi ajwayelekile.
Awudingi ukusebenzisa noma iyiphi i-shampoo.
Kwenze kabili ngesonto inyanga ukulawula ukuwa kwezinwele.
9. I-anyanisi Ijusi
Izici ezilwa namagciwane zika-anyanisi zisiza ukulwa nokutheleleka kwesikhumba, kanti okuqukethwe kwesibabule kuthuthukisa ukujikeleza kwegazi kuzintambo zezinwele. Ikhuthaza ukukhula kwezinwele futhi ilawula ukulahleka kwezinwele.
Ukukhipha ujusi we-anyanisi , gaya u-anyanisi bese ukhipha ujusi.
Gcoba ibhola likakotini kujusi we-anyanisi bese ulifaka ekhanda lakho.
Yiyeke imizuzu engama-20 kuye kwangama-30 bese uyigeza usebenzisa amanzi ajwayelekile kanye ne-shampoo emnene.
Landela le nqubo kanye ngesonto bese ubona umehluko.
I-Gooseberry yaseNdiya noma i-Amla elinye ikhambi lasekhaya elisebenzayo lokumisa ukuwa kwezinwele. Enye yezimbangela ukuntuleka kukavithamini C, yingakho ukusebenzisa i-amla kuzoqinisa izintambo zezinwele futhi kukusize ukuzilawula. Ngenxa yezindawo zayo zokulwa nokuvuvukala nokukhipha uketshezi, i-amla isiza ukukhuthaza ukukhula ngokushesha kwezinwele, ukugcina isikhumba esinempilo futhi kuvimbela ukumpunga ngaphambi kwesikhathi.
1Ungaxuba ijusi likalamula kanye ne-amla powder ukwenza unama.
Gcoba isikhumba sakho sekhanda nezinwele.
Sebenzisa ikepisi lokugeza ukumboza ikhanda lakho ukuze unamathisele lungomi.
Yigcine ihora lonke bese uyigeza ngamanzi ajwayelekile.
Ukudla Kwezinwele Ezinempilo
Ngenkathi ukwelashwa nama-shampoos kudlala indima ekugcineni izinwele ezinempilo, imfihlo yokuqina, okukhazimulayo, nokuqina okuqinile wukudla okunempilo.
Ukushoda kwe-Iron imbangela enkulu yokuwa kwezinwele. Isipinashi akusona nje kuphela umthombo omkhulu wensimbi kodwa futhi novithamini A, C kanye namaprotheni. Futhi iqukethe i-sebum esebenza njengesilungisi semvelo sezinwele futhi isinikeze i-omega-3 acid, i-magnesium, i-potassium ne-calcium. Lokhu kusiza ekugcineni isikhumba esiphilile nezinwele ezikhazimulayo.
Kwaziwa ukuthi kuhle emehlweni, izaqathe ziqukethe uVitamin A othuthukisa nokukhula kwezinwele. Ukushoda kukavithamini A kungaholela ekomeni futhi isikhumba esikhanyayo . Izaqathe ziyaziwa ukuthi zengeza ebunzimeni bezinwele, zenza izinwele zicwebezele, zithuthukise ukujikeleza kwegazi, ziqinise izinwele, zivikele izinwele emonakalweni wangaphandle njengokungcola futhi zisize futhi ekuvikeleni ukuwa kwezinwele nezinwele.
Njengoba izinwele zakhiwa ngamaprotheni e-keratin angamaphesenti angama-68, amaqanda asiza ekwakheni kabusha izinwele ezonakele. Banothile futhi ku-vitamin B obizwa nge-biotin osiza ukukhula kwezinwele.
Ama-oats acebile nge-fiber, zinc, iron, omega-6 fatty acids kanye ne-polyunsaturated fatty acids (PUFAs) evuselela izinwele futhi ezokwenza izinwele zakho ziqine futhi zibe nempilo.
Ama-walnuts aqukethe i-biotin, amavithamini B (B1, B6 kanye ne-B9), i-Vitamin E, amaprotheni amaningi ne-magnesium - konke okuqinisa izinwele zezinwele futhi kondla isikhumba. Kuyasiza ukuvikela amaseli akho ekulimaleni kwe-DNA okungadalwa ngenxa yokushiswa yilanga.
Ama-lentile angumthombo omkhulu wamaprotheni, i-iron, i-zinc, ne-biotin. Futhi zilayishwe nge-folic acid edingekayo ekubuyiseni impilo yamaseli abomvu egazi anikezela isikhumba nokhakhayi nge-oxygen edingeka kakhulu.
Inyama enciphile njengenkukhu noma ikalikuni icebile ngamaprotheni asezingeni eliphakeme aqinisa izinwele ezibuthaka futhi avimbele ukwephuka.
8. Amajikijolo namaGuavas
Ama-Strawberries aqukethe amazinga aphezulu kasilika. I-Silica ingumbiwa wamaminerali obalulekile ekuqiniseni izinwele nasekukhuleni kwezinwele. Okunye ukudla okunothe ngosilika kubandakanya irayisi, i-oats, u-anyanisi, iklabishi, ikhukhamba kanye nekholifulawa. Uvithamini C ubuye uvimbele izinwele ekubeni zingabi namandla okwephuka. Ngenkathi sihlala sicabanga ngamawolintshi njengomthombo omuhle kakhulu kavithamini C, ugwava owodwa upakisha okuphindwe kane kuye kahlanu.
I-yogurt igcwele uVitamin B5 noVithamini D aziwa ukukhuthaza impilo yezinwele.
10. Amazambane Amnandi
I-beta carotene ivikela izinwele ezomile nezingenamikhono futhi ivuselele izindlala ekhanda lakho ukwenza uketshezi olunamafutha olubizwa nge-sebum. Izithelo nemifino enombala wewolintshi enjengezaqathe, ithanga, ikhathalogi, umango kanye nobhatata kungumthombo omuhle walokhu.
Izeluleko Zokunakekelwa Kwezinwele Ngezikhiye Eziphilile
1. Ama-Trim ajwayelekile
Izinwele zivame ukonakala kakhulu eduze kwamathiphu, futhi ukusika okuhle njalo emavikini ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili kungasiza ukuxazulula izinkinga zakho. Izinwele ezonakalisiwe zinokuthungwa okufana notshani, futhi zingasikwa ukukhuthaza ukukhula nokususa uqhekeko .
Ingcindezi ingesinye sezimbangela zezinkinga eziningi zezempilo, kufaka phakathi ukulahleka kwezinwele. Kungaphazamisa nenqubo yokukhula kwezinwele futhi kuholele ekugayeni ngaphambi kwesikhathi. Futhi, ukuzindla ne-yoga njalo kungabonakala kungukucindezeleka okuhle.
3. Gwema Ukuthatha Imvula Eshisayo
Yize kududuza njengezihlambi ezishisayo, iphungula imicu (njengesikhumba nje), bese isusa isikhumba sokhakhayi samafutha aso emvelo, okuholela ezinyaweni ezomile, ezinamahlombe ezithanda ukwephuka. Esikhundleni salokho, khetha amanzi asivivi bese uzama ukugeza izinwele ngethempelesha ebanda kunazo zonke.
4. Ukuhlanganisa Izinwele Ezimanzi
Imicu yethu ayike ibe ntekenteke kakhudlwana futhi ithambekele ekwehlukaneni uma imanzi. Ngakho-ke kubalulekile ukusebenzisa ikama elinamazinyo abanzi noma uwavumele kome umoya kuqala ngaphambi kwanoma yiluphi uhlobo lwesitayela.
5.Ukugqoka Izitayela Zesitayela Esiqinile
Ukudonsa izinwele zakho ziqine kusuka ezimpandeni kudala ukulimala ngakho-ke, kufanele kugwenywe. Kuhle futhi ukungabophi izinwele zakho ziqine ngenkathi ulele.
ukusika ungqimba izinwele ezinde
Imibuzo evame ukubuzwa ngokuwa kwezinwele
U. Ukulahleka kwezinwele zami kubi impela, ngenzani?
TO. Kungcono ukuvakashela udokotela wesikhumba noma i-trichologist ezimweni zanoma yiluphi uhlobo lokuwa kwezinwele. Uchwepheshe angakunika uhlobo olufanele lokuqondisa maqondana nalokhu.
U. Ingabe i-alopecia ingaguqulwa?
TO. Kusukela manje, alikho ikhambi le-alopecia areata. Kodwa-ke, ngohlobo olufanele lwemithi nendlela yokuphila enempilo, cishe kunamathuba angama-80% wezinwele zakho ezikhulayo emuva konyaka ozayo.
amakhambi asekhaya okubuyisa izinwele
U. Kungaba kuhle ukuthi isitshalo sezinwele sibe se-balding?
TO. Ukuba ne-mop yemvelo yokuthunyelwe kwezinwele ukufakelwa izinwele akuyona into eyenzeka ngokushesha. Kuthatha cishe izinyanga eziyisithupha ukuthi izimpande zithathe. Ngokuhambisana nalokhu, kunezinkinga ezihambisana nesikhathi sokutakula. Kungcono uthintane nodokotela wetherikhi mayelana nalokhu njengoba kungemuva kokuhlolwa okuphelele lapho ungaqonda khona ukuthi le nqubo iyadingeka noma cha.
Ungase futhi ufunde ku ukwelashwa kokuwa kwezinwele okulula nokusebenzayo .
unganciphisa kanjani ukuzivocavoca esiswini
kanjani ukulawula izinwele zami ukuwa
kanjani ukususa izinwele ebusweni ekhaya
ukwelashwa kwezinwele kwemvelo kokukhula kwezinwele
unganciphisa kanjani ukuwa kwezinwele ngokweqile
amakhambi wemvelo wokutheleleka kwefungal